Quidgets na-enye gị ohere itinye wijetị na gam akporo Ndenye Ntọala obubọk | Gam akporosis
Wijetị bụ otu nke peculiarities nke gam akporo, na mgbe ọbụghị ndị ọrụ niile tinyere ha Na desktọọpụ ha dị iche iche, enwere ọtụtụ ndị ọzọ chọrọ ha iji nweta ozi kachasị mkpa nke onye na-agụ RSS ma ọ bụ ngwa ndepụta ga-enye. Otu n'ime àgwà ya kachasị mma bụ na ha na-enye anyị ohere ịnweta ozi ahụ na-enweghị imeghe ngwa ahụ kpamkpam.
Quidgets bụ ngwa ọhụrụ nke rutere n'oge a mmelite gam akporo Nougat Ha na-abịa site na ndị nrụpụta dị iche iche. Ọ bụ ngwa ahụ na-ahapụ gị hazie wijetị ịbanye ha na ngwa ntọala ntọala ngwa ngwa nke na-ada ala mgbe anyị nọ na ọkwa ahụ.
Enweelarị ngwa nke na-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe ahụ, ebe ọ bụ na Quidgets isi ọrụ bụ na ihe ọ bụla na-emeghe ngwa, ị nwere ike imeghe ngosi panel ịga ngwa ngwa ntọala ma si otú ahụ nwere wijetị ahụ. Ọ bụ otu n'ime ngwa ndị ahụ na - eji ozi ọma nke ụdị gam akporo buru ibu nke Android ka a mata ma nye nhọrọ dị iche iche na ndị ọzọ maka ndị ọrụ.
Quidgets-enye gị ohere ekenye taịl nile maka iheẹkedori wijetị ọ bụla ihe Ị chọrọ. Select họrọ ụfọdụ taịl nile ka ị nwee ike hazie ha ka ịchọrọ ma gosipụta wijetị na etiti ọcha mgbe apịrị. Ewezuga ngbanwe ahụ anya ahụ, ịmekọrịta ya bụ otu ihe ma ọ bụrụ na emere ya na desktọọpụ.
Anyị na-edezi taịl nile na ngwa ngwa ngwa ngwa, anyị na-adọta Mozis na ngwa ntọala ohere ma pịa ya ka ị hazi ya. A ghaghi ikwu na ngwa a nwere ike ịrụ ọrụ na ụfọdụ ngwaọrụ, ma na ndị ọzọ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnwee Nougat, ịnweghị ike ịnweta ya. Ọ ga - abụ ihe gbasara imelite ngwa iji nwee ike iji ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Quidgets na-enye gị ohere ịmalite wijetị site na ngwanrọ ntọala ngwa ngwa gam akporo
AutoVoice maka Homelọ Gugul na-eweta iwu idozigharị zuru oke